Beesha Laylakase “Nidaamka Puntland Wuxuu u Afduuban Yahay Siyaasiyiinta u Dhashay “Majeerteen” – Balcad.com Teyteyleey
Odayaasha iyo waxgaradka Beesha Tanade Daarood ayaa maanta magaalada Garowe kaga dhawaaqay inay masiirka beeshooda kaga tashanayaan kulan muddo 30 maalmood gudahood kaga dhici doona magaalada Gaalkacyo.
War saxaafadeed ka soo baxay gabagabada gogol ay beeshu dhigtay magaalada Garowe, ayay odayaashu iyo waxgaradku ku caddeeyeen inay gooni uga tashadaan masiirka beesha, iyadoo beeshu u garawday beelaha kale ee ku dulman habka metelaada iyo awood qeybsiga Puntland.
War saxaafadeedka oo nuqul ka mid ah uu soo gaaray Raxanreeb (RBC Radio) ayaa muujiyay sida Dastuurka Puntland iyo nidaamka dowliga ah uu ugu afduuban yahay siyaasiyiinta beesha “Majeerteen”.
“Shirar badan oo ay la yeelatay beeshu madaxda Maamulka, Isimada, Waxgaradka iyo Siyaasiyiinta beelaha ku bahoobay Puntland, waxaa beeshu xaqiiqsatay; in dulmiga awood qeybsiga Puntland uu yahay mid qoto dheer, kuna saleysan hab qabaliya; in xallintii tabashada beesha Tanade iyo go’aankii Isimada Puntland ay hortaagan yihiin dhammaan siyaasiyiinta beesha Majeerteen.” ayaa lagu yiri war saxaafadeedka qoraalka ee soo gaaray Raxanreeb (RBC Radio).
HAL QOF IYO COD
War saxaafadeedka Beesha Tanade ka soo saartay gogoshii uga furneyd magaalada Garowe, ayaa sidoo kale looga hadlay caqabada hortaagan hirgelinta nidaamka hal qof iyo cod ee lagu guuleysan la’ yahay Puntland.
“Markay u caddaatay inuu ka socon la’ yahay nidaamkii hal qof iyo hal cod Beesha Majeerteen, ujeedkeeduna yahay inay taraysato kursiga madaxweynaha iyo ku tagri falk awoodaha dalka;
“Markay u caddaatay in Dastuurka Puntland hal beel ay ku ilaashato danaheeda, lana dhumiyay danihii dalka iyo beelaha kale, lana furo marka beesha Majeerteen danaheedu gasho oo keliya”. ayuu sii raaciyay qoraalka war saxaafadeedka odayaasha beesha Tanade.
Odayaasha beesha Tanade waxay u mahadceliyeen isimada Puntland ee gogosha Garowe ka qeybgalay, isla markaana u go’aamiyay in afar xubnood beesha Tanade loogu daro Baarlamaanka Puntland, loona furo dastuurka.
War saxaafadeedka ayaa mahadcelinta ku xusay Boqor Burhaan, Islaan Bashiir iyo Isimada beesha Dhulbahante ee Muqdisho jooga kuwaasoo wakiilo u soo dirsaday gogosha Garowe ee beesha Tanade.
Waxay sidoo kale tilmaameen mahadnaqa ay u jeediyeen siyaasiyiinta labada gole ee Puntland (Xildhibaanada iyo Wasiirada) ee beelaha Warsangeli, Dhulbahante iyo Dhishiishe ee ballanqaaday inay ansixiyaan guddoonkii Isimada, kana garaabay “dulmiga” ay tirsatay Beesha Tanade ee awood qaybsiga Puntland.
Beesha ayaa war saxaafadeedka ku go’aamisay in muddo 30 beri oo maanta ka bilaabata ay ku qabaneyso magaalada Gaalkayo kulan ay beesha Tanade kaga arrinsaneyso masiirkeeda.
The post Beesha Laylakase “Nidaamka Puntland Wuxuu u Afduuban Yahay Siyaasiyiinta u Dhashay “Majeerteen” appeared first on Ilwareed Online.